Ny fandrisihana lehibe ho ahy handika ho an’ny GV · Global Voices teny Malagasy
Ny fandrisihana lehibe ho ahy handika ho an'ny GV
Voadika ny 23 Jolay 2019 4:55 GMT
May 2009 ny toniandahatsoratra sady mpanorina ny GV Swahili, Joe Tungaraza, no nampisantatra ahy ny GV. Iray tamin'ireo mpisavalalana teo anivon'ny tontolon'ny bilaogy Swahili no nahalalako azy hatrizay, tany amin'ny taona 2004/05. Izy dia anisan'ireo Tanzaniàna vitsy ao anatin'ny zanaka am-pielezana niasa mafy mba handrisika ny mpampiasa aterineto any an-tanindrazana hanoratra bilaogy amin'ny fiteny Swahili.
Andro ‘namirapiratan'ny fanoratana bilaogy’ tao Tanzania tamin'ireny andro ireny. Ndesanjo Macha izay mpiandraikitra tsanganana isankerinandro tao aminà gazety iray tao an-toerana no nitarika ny hetsika. Nisy fiantraikany tamin'ny fomba fihevitro amin'ny naha-mpianatra ahy ireo fampisaintsainana nataony isankerinandro momba ny kolontsaina sy ny politika afrikàna. Tsy maintsy manaiky aho fa izay fiantraikany izay no nandrisika ahy hanomboka ny bialogiko Swahili manokana tamin'ny 2005.
Ny May 2009, indray hariva dia niantso ahy i Joe nanasa ahy hanjohy ny Lingua Swahili. Talanjona aho handray anjara amin'ilay tetikasa satria efa mpandala fatratra ny fiteny Swahili. Tamin'ireny taona ireny dia marobe ireo olona naminavina hoe ato anatin'ny taonjato iray ny fiteny Swahili dia ho sokina nanani-bato ka tonga amin'ny fetrany. Ireny fihevitra manambany tena ireny dia manana ny fakàny ao anatin'ny fisainan'ny daholobe izay mihevitra fa ny ‘nahazoana fanabeazana tsara’ dia midika fahatakarana sy fahaizana miteny anglisy. Tsy vaovao tsara ireny ho an'ilay fiteny izay hany fiteny ofisialy afrikana tokana ho an'ny Firaisambe Afrikàna.
Araka izany dia hitako ho mahaliana indrindra ny tetikasa Lingua ary noheveriko ho fahafahana iray handraisako anjara hampiroborobo ny fiteny Swahili. Ny fandikana voalohany nataoko dia navoaka tamin'ny 25 May 2009, avy amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Amira Al Hussaini. Mbola tsaroako hatrany ny fientanentanako sy ny fahatretrehako.
Tsy hoe nandeha ho azy ny zavatra rehetra tany am-piandohana. Tsy nanana fototra nifaharana aho raha momba ny fiteny sy ny asa fanaovana gazety. Ny kolontsaina tsara indrindra fantatro dia ny ahy manokana. Tena fanamby ny fahatakarana ny fahamaroana kolontsaina misisika any anatin'ireo tanisa sasany niaingàna, ary nosoratana tanaty vanimpotoana tena samihafa tanteraka. Nila fotoana elaela aho vao afaka nipetraka tanatin'ny zavanisy. Tsaroako io zavatra niainana io fony aho nandika lahatsoratra iray nanasongadina ilay adihevitr'ireo mpankafy baolina kitra momba ny hanakànana na tsia ny Vuvuzelas mandritra ny Fiadiana Tompondaka Erantany 2010 tao Afrika Atsimo.
Tena feno fankasitrahana an'i Joe aho izay nanana faharetana sy fahatsorampo vonona ny hampivelatra ny fahaizako mandika lahatsoratra arakaraky ny nahitany ahy nitombo niandalana teny. Nanomboka teo, an-jatony ireo lahatsoratra nadikako avy amin'ireo tanibe enina, niainga avy amin'ny kolontsaina, politika, zon'olombelona, demaokrasia sy ny maro hafa. Traikefa nianaran-javatra nitohy sy tsy mampino izany.
Ao anatin'ny kolontsaina izay zara raha misy ny firotsahana hanao zavatra an-tsitrapo, na mety tsy misy mihitsy aza, indraindray aho mifanehatra amin'olona izay tsy mahatakatra mihitsy ny antony iasako ho an'ny GV Swahili. “Inono no mandriska anao?” hoy ireo olom-pantatro rehefa manontany ahy mazàna. Tsy takatr'izy ireo ny antony andanian'ny olona iray eto amin'ity tontolo ity ny fotoanany hanao asa iray tsy andraisana vola. Mandrakariva ny valinteniko dia hoe ny fiteny Swahili dia manome ahy sehatra iray sahaza mba hamoronana votoaty nomerika afaka ho anà olona manodidina ny 150 tapitrisa miteny ny fiteniko ao amin'ny faritra Afrika Atsinanana sy Afovoany.
Mihamitombo ny fahafahana miditra aterineto ao Afrika. Ireo fitaovana finday no nahafahana nanatanteraka ny fampidirana tolotra aterineto ho an'ireo olona any amin'ny faritra. Indrisy anefa, ny ankamaroan'ireo torohay azo raisina ety anaty tambajotra dia amin'ny fiteny vahiny avokoa izay miteraka fangatahana votoaty misimisy kokoa hatao amin'ny fiteny eo an-toerana. Araka izany, amin'ny alàlan'ny fandikàna izay zavatra mitranga manerana ny tany ho amin'ny tenin'izy ireo eo an-toerana, azoko atao ny manampy ireo mpampiasa ny fiteny Swahili ‘hihaino izay lazain'izao tontolo izao’ amin'ny tenin-dry zareo izay hainy tsara.
Nandritra ireo taona maro nanaovako fandikàna lahatsoratra, niaina kolontsaina vahiny maro aho araka ny hita tanatin'ireo lahatsoratra niasàko. Indraindray aho miasa aminà lahatsoratra mifanohitra tanteraka amin'ny soatoavina arahako. Saingy mampientanentana tokoa ny mandre ny fomba fijery hafa ananan'ireo hafa mpampiasa aterineto an'ity izao tontolo izao ity. Izaho amin'ny maha-mpandika, mahatonga ahy hankasitraka ny fomba itondran'ny Global Voices ny olona eny an-toerana hanakaiky an'izao tontolo izao mba hametrahana fandaharam-baovao ho an'ny olona erantany, tsy ijerena izay kolontsaina niaviany.
Lasa fianakaviako ny Global Voices. Nihaonako tamin'olona mahafinaritra ary manana traikefa mahatalanjona. Nampitombo ny masonkarena sosialy efa nananako ny Global Voices, mihoatra lavitra noho izay noeritreretiko na noheveriko aza. Antenaiko ho maro kokoa ireo olona avy amin'ireo faritra mampiasa ny fiteny Swahili hanatevina laharana ity tetikasa mahatalanjona ity.
12 ora izayAzia Atsinanana
13 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana